ကုန်ကြမ်း URB597 (546141-08-6) HPLC≥98% | AASraw ရွေးချယ် inhibitor
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / URB597
rating: အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် Tags: URB597 ဝယ်ဖို့, URB597, ရောင်းရန် URB597, URB597 ပေးသွင်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ URB597 (546141-08-6) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
URB597လည်း KDS-4103 အဖြစ်လူသိများ, 50 nm နှင့် 50 nm ၏ 4.6% တားစီးအာရုံစူးစိုက်မှု IC0.5 ၏တန်ဖိုးများနှင့်အတူဖက်တီး-အက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH), အ endocannabinoid anandamide ၏ intracellular Hydrolysis catalyzing အနေနဲ့အင်ဇိုင်း၏ inhibitor အလွန်အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ်ဖြစ်ပါသည် ကြွက်ဦးနှောက်အမြှေးပါးနှင့်လူ့အသည်း microsomes အတွက်အသီးသီး။ URB597 cannabinoid ကဲ့သို့သောဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေ evoking မပါဘဲ Vivo အတွက် anxiolytic, လက္ခဏာ, antinociceptive နှင့် analgesic သက်ရောက်မှုထားပါတယ်။
နာမ်: N-Cyclohexylcarbamic အက်ဆစ်3'- (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl Ester; 3'-CarbaMoyl- [1,1'-biphenyl] -3-yl cyclohexylcarbaMate; 3- (3-carbaMoylphenyl) phenyl N-cyclohexylcarbaMate ; CarbaMic အက်ဆစ်, N-cyclohexyl-,3'- (aMinocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl Ester; KDS 4103 N-Cyclohexylcarbamic အက်ဆစ် 3' - (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl Ester ; N-Cyclohexylcarbamic အက်ဆစ်3'- (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl Ester URB 597 KDS 4103; URB 597> = 98%; APD597 (URB597)
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 155-157 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
alpha: : D +5° (chloroform အတွက်က c = 0.437)
ပျော်ဝင် DMSO: (နွေး) ရှင်းရှင်းလင်းလင်း soluble2mg / mL,
II ကို။ သံသရာအတွက် URB597 အသုံးပြုမှု:
2.How URB597 များအတွက်အလုပ်ပါသလဲ
ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်: cannabinoid အဲဒီ receptor 1 (CB1) ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုက်ရိုက် agonists နှင့်အတူအဓိကလက်တွေ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဤဒြပ်ပေါင်းများကိုအရက်သောက်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု-related အပြုအမူတွေကိုတိုးမြှင့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်, CB1-receptor-mediated လှုပ်ရှားမှု hydrolase ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH) inhibitors ၏အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ anandamide အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် facilitated နိုင်ပါသည်။ Objective: အရွေးချယ် FAAH inhibitor URB597 အသုံးပြုခြင်း, ကျနော်တို့ endogenous cannabinoid သေံ၏ activation ဘာ CB1 အဲဒီ receptor တိုက်ရိုက် agonists နှင့်အတူဖြစ်ပျက်အဖြစ်, အရက်အလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှုကိုတိုးပွားစေခြင်းရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ: URB597 Wistar ကြွက်များနှင့်မျိုးရိုးဗီဇကိုရှေးခယျြ Marchigian Sardinian အရက်- သာ. နှစ်သက် (msP) ကြွက်များတွင် homecage အရက်သေစာသောက်သုံးအပေါ်အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ Wistar ကြွက်များတွင်အရက်-သွေးဆောင်စိုးရိမ်စိတ်ပေါ်နှင့် stress- အပေါ် URB597 သက်ရောက်မှု, အရက်ရှာကြံ၏ yohimbine- နှင့် cue-သွေးဆောင် reinstatement ကိုလည်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုအဘို့, အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် CB1 အဲဒီ receptor ရန် rimonabant ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ ရလဒ်များ: URB597 ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်အခြေအနေ intraperitoneal (IP) အုပ်ချုပ်မှုအောက် (0.0, 0.3 နှင့် 1.0 / ကီလိုဂရမ် mg) msP ကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက် homecage အရက်သေစာသောက်သုံးမဟုတ်သလိုသင်တန်းနည်းပြ fixed အချိုး 1 နှင့် nonselected Wistars အတွက်တိုးတက်သောအချိုးအရက် Self-အုပ်ချုပ်မှုမဟုတ်။ အဆိုပါ reinstatement စမ်းသပ်မှုများတွင်ဝင်း cue-, footshock stress- နှင့် yohimbine-သွေးဆောင် relapse အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ပြောင်းပြန် URB597 လုံးဝအရက်၏စူးရှသော IP ကိုအုပ်ချုပ်ရေး (3.0 g / ကီလိုဂရမ်) အပြီးဆုတ်ခွာစဉ်ကတိုင်းတာသည့် anxiogenic တုံ့ပြန်မှုဖျက်သိမ်း။ Rimonabant (0.0, 0.3, 1.0 နှင့် 3.0 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကိုသိသိသာသာလျှော့ချအီသနော Self-အုပ်ချုပ်မှု။ ကောက်ချက်: ရလဒ်များ FAAH ၏ရွေးချယ်တားစီးအားဖြင့် endocannabinoid anandamide စနစ်၏ activation အရက်အလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်များကိုတိုးမြှင့်တော်မမူကြောင်းကိုသရုပ်ပြပေမယ့်အရက်ဆုတ်ခွာဖို့ဆက်စပ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချပါဘူး။ ကျနော်တို့အရှင်ထိုကဲ့သို့သော URB597 အဖြစ် endocannabinoid system ကို၎င်း module အသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံပြီးဆေးဝါးတိုက်ရိုက် CB1 အဲဒီ receptor Active နှင့်အတူကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရေးကြီးသောအားသာချက်များကိုပူဇော်စေခြင်းငှါမှနျးနိုငျသညျ။
3.Is အကျိုးသက်ရောက်မှု URB597?
မော်တော်ယာဉ်ကနေΔ597-THC ခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိသည်ဟူသော URB4၏သက်ရောက်မှုတစ်ဦးတည်းနှင့် anandamide နဲ့ပေါင်းပြီးတဦးတည်းမျောက်အုပ်စု (ဎ = 9) တွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြ (0.1 မီလီဂရမ်·ကီလိုဂရမ်-1 ဃ), နှင့်အခြားအုပ်စုတစ်စု (ဎ = 5) တွင်လက်ခံရရှိ အဆိုပါ cannabinoid ရန် rimonabant ခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိသည်ဟူသောနာတာရှည်Δ9-THC (1 မီလီဂရမ်·ကီလိုဂရမ်-112 ဇ-1 SC) (1 မီလီဂရမ်·ကီလိုဂရမ်-1 ဃ) ။
URB 597 အဆိုပါ anandamide ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုရှိသော်လည်းအခြားအ CB1 agonists တိုးမြှင့်။ သို့သော် URB 597 သိသိသာသာ anandamide အားဖြင့်သွေးဆောင်Δ9-THC ဆုတ်ခွာ၏ကို attenuation မြှင့်တင်ရန်ခဲ့ပါဘူး။ စုပေါင်းအဲဒီဒေတာမျောက်ဦးနှောက်ထဲမှာ endogenous anandamide အလွယ်တကူ exogenously အုပ်ချုပ် anandamide များ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုတူတဲ့တော်မမူကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ်ဖက်တီးအက်ဆစ်များကြားတွင် hydrolase (FAAH) inhibitor (IC50 တန်ဖိုးများကိုအသီးသီး, လူ့အသည်းနှင့်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ3နှင့်5nm ရှိပါတယ်) ။ လူ့ cannabinoid receptors နှင့်ကြွက် monoacylglycerol lipase အပါအဝင် receptors, အိုင်းလိုင်းများနှင့်အင်ဇိုင်းတွေအမျိုးမျိုး, ဆန့်ကျင်ပြပွဲမျှသိသာ inhibitory လှုပ်ရှားမှု။ တစ်ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုမော်ဒယ်အတွက် antiallodynic နှင့် antihyperalgesic လှုပ်ရှားမှုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ စသည်တို့အတွက်, KDS-4103 လူ့အသည်း microsomes အတွက်ကြွက်ဦးနှောက်အမြှေးပါးအတွင်း 50 nm နှင့်5nm ၏ပျမ်းမျှ inhibitory ပြင်းအား (IC (3)) နှင့်အတူ FAAH လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Vivo ခုနှစ်, KDS-4103 50 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်တစ်ဦးပျမ်းမျှ inhibitory ထိုး (ID ကို (0.15)) နှင့်အတူကြွက်ဦးနှောက် FAAH လှုပ်ရှားမှုအပြီး intraperitoneal (ip) အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းသိသိသာသာ cannabinoid receptors နှင့် anandamide သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအဝင်အခြား cannabinoid-related ပစ်မှတ်နှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ် receptors, အိုင်းလိုင်းများ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အင်ဇိုင်းတွေ၏ကျယ်ပြန့် panel ကိုအတူဆက်ဆံပါဘူး။ ip အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ကြွက်များနှင့်ကြွက်များမှ KDS-4103 CB1 အဲဒီ receptor ရန်နှင့်အတူကုသမှုအားဖြင့်တားဆီးထားတဲ့, သိသာ anxiolytic-ကဲ့သို့လက္ခဏာတူသောနှင့် analgesic သက်ရောက်မှု, elicits ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, သိသိသာသာ FAAH လှုပ်ရှားမှုတားစီးနှင့်သိသိသာသာဦးနှောက် anandamide အဆင့်ဆင့်မြှင့်တင်ကြောင်းဆေးများမှာ KDS-4103 ဂန္ထဝင် cannabinoid ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ (ဥပမာ catalepsy, hypothermia, hyperphagia) ကျလာသောပါဘူး, နေရာ preference ကိုဖြစ်ပေါ်စေဘူး, မှ General ထုတ်လုပ်ရန်မဟုတ်ပါ အဆိုပါခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆေးခြောက်များ၏တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းများ၏သက်ရောက်မှုများ, Delta9-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် KDS-4103 ပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုနှင့်နာကျင်မှုထိန်းချုပ်အတွက်စေ့စပ်စေခြင်းငှါအရာသမဝါယမ (1) receptors ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ပေါ် anandamide ၏လုပ်သူများလုပ်ရပ်များ, တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ပြုမူကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ KDS-4103 ကြွက်များနှင့် cynomolgus မျောက်တွေကိုနှုတ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဲဒီနှစျခုမျိုးစိတ်အတွက် (os နှုန်း 1,500 mg / kg) sub-နာတာရှည်အထပ်ထပ်ထိုးလေ့လာမှုများစနစ်တကျအဆိပ်သရုပ်ပြကြပြီမဟုတ်။ ထိုနည်းတူစွာအဘယ်သူမျှမအဆိပ်အတောက်စသည်တို့နှင့် Ames စမ်းသပ်မှုများတွင်ဘက်တီးရီးယား cytotoxicity စမ်းသပ်မှုများတွင်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထို့အပွငျအဘယ်သူမျှမလိုငွေပြမှု 4103 မှတက်ဆေးများမှာ KDS-5 နှင့်အတူစူးရှ ip ကုသမှုပြီးနောက် rotarod စမ်းသပ်မှုအပေါ်ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် 1,500 မှတက်ပါးစပ်ဆေးများ / ကီလိုဂရမ် MG ပြီးနောက် / ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ်တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့လေ့လာရေးဘက်ထရီအတွက် MG ။ ရလဒ် KDS-4103 စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်နာကျင်မှု၏ကုသမှုများအတွက်အဆင်သင့်ကုထုံးပြတင်းပေါက်နဲ့ဝတ္ထုချဉ်းကပ်ပူဇော်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
5 ။ URB597:
6 ။ URB597 ချက်ပြုတ်နည်း:
7 ။ URB597 စျေးကွက်:
III ကို။ URB597 HNMR
IV ။ AASraw ထံမှ URB597 ဝယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
"URB597" ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ် ပြန်ကြားချက် Cancel